KDQ oo soo gabagabeeyey Qaybintii Kaadhadhka G/Saxil & G/Awdal | Somaliland National Electoral Commission
Home 2017 May 22 News KDQ oo soo gabagabeeyey Qaybintii Kaadhadhka G/Saxil & G/Awdal
Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo soo gabagabeeyey qaybintii kaadhadhka codbixiyaha ee mudooyinkii u dambeeyey ka socotay Gobalada Awdal, Saaxil iyo xeebaha Gobolka Sanaag.
Muddadaas hawsha kaadh qaybintu socotay waxa si guud uga qayb qaatay Xubnaha KDQ, shaqaalaha KDQ heer qaran iyo heer gobalba, ciidamada Amaanka, Xisbiyada qaranka, maamulada heer gobol iyo heer Degmo, ururada maxaliga ah iyo dhamaan bulshada inteeda kaleba.
Hawshan kaadh qaybinta oo aheyd hawl culus kuna soo dhammaatay guul, maanta oo Isniin ahna 22/05/2017 kulamadii xidhitaanku ka dhici doonaan magaalooyinka Berbera iyo Boorama. Waxay KDQ ku wargalinayan in hawshaasi sidii loogu talo galay iyo si ka fiicanba ugu qabsoontay. Sidoo kalana ay Gobalada hadhsan u dirayaan fariin ah in ay u diyaar garoobaan, kana faa’iideystaan fursada kaadh qaadashada oo ka bilaabmi doonta labada gobol ee Togdheer iyo Maroodijeex bisha Barakeysan ee Ramadaan ka bacdi.
Filed in: News Tags: Hawsha kaadh qaybinta Gobalada Awdal iyo Saaxil oo la soo gabagabeeyey